Hore qabow. Waa maxay, sidee loo sameeyay maxaase ka dhalan kara | Saadaasha Shabakadda
Cimilada waxaa saameyn ku leh doorsoomayaal badan oo saadaasha hawada. Qiyamka doorsoomayaashaasi waa kuwa sababa degganaanta jawiga, xasiloonida, dabeylaha, roobabka, iwm. Xaqiiqdii waad maqashay cimilada oo hadlay marar badan isagoo leh a hore qabow. Muxuu yahay wejigan qabow?
Qormadan waxaan ku sharxi doonnaa waxa uu yahay qabowga hore, sida uu u samaysan yahay iyo cawaaqibka uu ku leeyahay cimilada.
1 Waa maxay hore qabow
2 Sidee loo sameeyay
4 Mar hore soo dhaaf
Waa maxay hore qabow
Markaan kahadalno hore, waxaan tixraaceynaa xariijin isku xireysa labada hawo oo leh astaamo kala duwan. Cufnaanta hawadu way wareegayaan waxayna leeyihiin astaamo kala duwan iyadoo ku xiran hadba isbeddelada saadaasha hawada ee aan kor ku soo xusnay. Mid ka mid ah arrimaha sida weyn loogu tixgeliyo qiimayaasha cimilada si loo ogaado astaamaha hore waa heerkulka.
Iyada oo la adeegsanayo doorsoomahan, badiyaa, waxaan ku ogaan karnaa nooca hore ee ku soo socda aag. Haddii ay tahay hore qabow, hore kulul, iwm. Mid kale oo ka mid ah doorsoomayaasha cimilada ee ay dhinacyada ku tiirsan yihiin lhuurka, xawaaraha dabaysha iyo jihada iyo cadaadiska Hawada.
Wejiga qabow waa kan tilmaamaya soohdinta udhaxeysa hawo dhaqaaq qabow leh, oo ka soo horjeedda hawo kulul. Caadi ahaan, jihooyinka noocan ah waa cufnaanta qabow ee barakicinaysa cufnaanta hawo kulul. Waa muhiim in la ogaado in miisaanka hawadu aanu ku milmin hal weji. Haddii kale, lama samayn doono wejigaas oo kale. Waa inaan tixgelinno farqiga u dhexeeya cufnaanta marka laga hadlayo cufnaanta hawada.
Xusuuso in hawo kulul waa ka cufan tahay hawada qabow, sidaas darteed had iyo jeer waxay u muuqataa inay kacdo. Marka cufnaanta hawo qabow iyo hawo kulul ay kulmaan, waa cufnaanta hawo qabow ee si dhakhso leh u socota, kuna dheggan dusha sare maxaa yeelay way ka cufan tahay. Tani waxay keentaa in hawada kulul ay u dhaqaaqdo dherer maxaa yeelay way ka cufan tahay. Haddii aan qabno weji qabow, guud ahaan, heer kulka ayaa hoos u dhici doona maaddaama hawo ugu qabow ay dul taal dusha.
Sawir - Wikimedia / HERMENEGILDO SANTISTEBAN
Waxaan dooneynaa inaan falanqeyno talaabo talaabo ah sida noocan oo kale ah ee hore u sameysmay. Markaynu leenahay hawo qoyan oo aan xasilloonayn, markay u janjeerto inay kacdo cufnaanta hoose awgeed, waxay ku dhici doontaa hoos u dhaca heerkulka caadiga ah dusha sare. Markii aan kor u qaadno joogga, heerkulka ayaa ku yaraada kuleylka kuleylka. Tani waxay sababi doontaa in hawada kulul ay isku koobto daruuro.
Waxay kuxirantahay xaaladaha deegaanka iyo xaddiga hawo kulul oo ururinaysa, way kala duwan yihiin noocyada daruuraha. Haddii hawo qabow barakiciso tiro badan oo hawo diirran oo heer sare ah,Waxaan ku dambayn doonnaa in badan oo hawadan ah oo isku ururin doonta jooggeeda. Tani waxay sababi doontaa koritaanka toosan ee daruuraha nooca cumulonimbus.
Noocyada daruuraha ahi waxay sababaan buuq weyn oo jawiga ku dhaca oo kiciya roobab culus oo culus. Dhacdooyinka aan heli karno waxaa ka mid ah roob dhagaxyaale, dabeylaha korontada, dabaylo aad u xoog badan, duufaano baraf ah, kacdoon xun, dabeylo qulqulaya iyo xitaa duufaanno haddii ay sameysan karaan.
Sidoo kale waa in la sheegaa in horjoogayaasha qabow oo dhan aysan sidaa u rabshad badneyn. Heerka rabshada ama halista webiga hortiisa waxay kuxirantahay qoyaanka hawada hawo kulul, marka lagu daro qadarka hawo kulul oo la ururiyey. Waa macquul in kor u kaca hawo diiran uusan aheyn mid toosan oo sameysmaya daruuro taagan, laakiin nimbostratus qaar ayaa ku sameysmi doona roobab dhexdhexaad ah. Mid ka mid ah qiyamka ugu go'aaminta badan waa xawaaraha dabaysha. Waxay kuxirantahay qiimahan, cufnaanta hawo qabow waxay ku dhaqaaqi doontaa xawaare sare taas oo, markeeda, dhaqaajin doonta hawo diiran oo dherer ah. Haddii hawadu qoyan tahay oo dhaqdhaqaaquna gebi ahaanba taagan yahay, waxaan lahaan doonnaa cimilo masiibo leh.
Jihooyinka qabow waxay u muuqdaan inay dhaqso u dhaqaaqaan, xawaareyna u dhexeeya 40 iyo 60 km / saacaddii. Tani waxay ka dhigeysaa waqtiga ay soconayaan inta udhaxeysa 3 iyo 7 maalmood. Dhererka juquraafi ahaaneed ee aagga oo dhan oo badanaa saameeya inta badan waa inta u dhexeysa 500 iyo 5.000 km. Sida ballaca, waxay noqon kartaa inta udhaxeysa 5 km iyo 50 km.
Marka weji qabow la sheego inuu ku soo dhowaanayo, hawo kulul cadaadiska jawiga ayaa deggan. Waxay sidoo kale noqon kartaa inay ku dhacdo hoos u dhac yar taas oo ah waxa sababa hawadu inay u janjeerto inay u dhaqaaqdo aagga leh cadaadiska hawo yar. Waxa ugu horreeya ee aan sida caadiga ah u fiirsano si loo aqoonsado hore qabow waa sameynta daruuro cadcad oo aad u sarreeya. Daruurahaasi waxay ka mid yihiin nooca cirrostratus. Mar dambe, se waxay sameystaan ​​daruuro dhexdhexaad ah sida Altocumulus ama Altostratus. Waqtigaan, dabayshu waa fududahay laakiin ma laha jiho toosan.
Marba marka uu qabowgu sii dhowaado marba marka ka dambaysa, daruuraha marba marka ka dambeysa way sii dhumuc weynaanayaan roobkuna wuu sii xoogaysanayaa. Iskusoo wada duuboo, waxa ugu badan ee tilmaamaya u dhawaanshaha hore ee qabow ayaa ah kordhinta cabirka dhibcaha biyaha. Dabayluhu waxay bilaabaan inay noqdaan dabeyl welina ma laha jihada xasilloon.
Markii aan horeyba ula xiriirnay xagga hore ee qabowga, waxaan ogaaneynaa hoos u dhaca heerkulka, xoogan maydhasho kuwaas oo badanaa la socda duufaan, dabayl duufaanno xoog leh leh, aragti liidata iyo bado kacsan.
Mar hore soo dhaaf
Marka wejiga qabow laga gudbo, waxaan awoodi doonnaa inaan ku aragno bannaano ballaaran woqooyi galbeed waxayna wanaajin doontaa muuqaalka inbadan. Heerkulka xoogaa hoos ayuu u dhici doonaa waxaana jiri doona qoyaan yar. Cadaadiska Hawada ayaa si dhakhso leh u kordha, maxaa yeelay hawada dusheena waa ka qabowsan tahay sidaas darteedna waa ka culus tahay.
Dhanka daruuraha, daruuro cumulus oo go'doon ah ayaa soo muuqan kara laakiin roob la'aan badan. Qeybta woqooyi, doorka dabayshu waxay aadi doontaa dhanka midig iyo koonfurta dhinaceeda bidix iyadoo loo aaneynayo saameynta coriolis.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto wajiga qabow iyo wax walboo la xiriira.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Hore qabow
Aad baad ugu mahadsan tihiin macluumaadka.Waxaan qabaa su'aal, waxaan ku noolahay Tegucigalpa, Honduras, laakiin halkan markii la yiraahdo waxaa jira weji qabow, daruuraha ayaa midabkiisu casaan yahay oo ma da'o roob.
Ku jawaab ARNOLD GÓMEZ
Sharaxaad aad u wanaagsan